Ku naso Ciise, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Kadib markaad shaqadaada dhameyso, waxaad dooneysaa inaad nasato fiican. Waxay u sii daayaan naftooda inay ku cayaaraan shaqo la'aan macaan si ay u neefsadaan si sahlan oo ay u ururiyaan xoog cusub. Kuwa kale waxay ku raaxeystaan ​​isboortiga iyo dabeecadda ama ku raaxaystaan ​​nasashadooda qaab muusig ama dhiirigelin akhris.
"Deganaansho" Waxaan ula jeedaa tayada nolosha oo gebi ahaanba ka duwan. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku qoro weedha ah "ku nuuxnuux ciise". Tan waxaan ula jeedaa deganaanshaha qoto dheer ee jira oo sidaas u dhammaystiran oo deggan. Ilaah wuxuu nasasho oo dhan qaadanayaa dhammaanteen haddii aan runtii furan nahay oo aan u aqbalno. "Warka wanaagsan", injiilka, waxaa ku jira badbaadadaada xagga Ciise Masiix. Hadafka tani waa in la dhaxlo boqortooyada Ilaah ee loo maro Ciise oo lagu noolaado nasashadiisa weligeed. Si kale haddii loo dhigo, in lagu nasiyo Ciise.
Si tan loo fahmo, waxaad u baahan tahay "dhegaha furan ee wadnaha". Sababta oo ah Ilaah wuxuu leeyahay deganaansho noocan oo kale ah qof kasta, waxaan u rajeynayaa qoto dheer inaad la kulanto oo aad ku raaxeysatid deganaashahan
Markan waxaan ka fikirayaa kulanka dhex maray Nikodemos, oo ka mid ah saraakiishii Yuhuudda iyo ciise. Nikodemos habeenkii buu Ciise u yimid oo ku yidhi, Macallimow, waannu og nahay inaad tahay macallin uu Ilaah soo diray. Sababta oo ah qofna ma samayn karo mucjisooyin sidaadoo kale ah marka uusan Ilaah la jirin. Ciise ayaa ugu jawaabay, Waxaan kugu leeyahay, Qof haddaanu mar kale dhalan, boqortooyadii Ilaah arki kari maayo. Sheekada oo dhan waxaa laga heli karaa fahamka Yooxanaa 3,1: 15.
Si aad u aragto Boqortooyada Ilaah, Nikodemos, iyo maanta adiguna waxaad u baahan tahay Ruuxa Quduuska ah. Waxay ku soo duulaysaa hareerahaaga, sida dabaysha oo aydnaan arkin, laakiin waxyeelada aad kala kulanto. Saameyntani waxay marqaati u yihiin awoodda Ilaah ee beddeleysa noloshaada maxaa yeelay waxaad ku wada midooban tihiin ciise boqortooyadiisa.
Waxaa loo gudbiyay waqtigeena, waxaan u dhigay sidan: Haddii aan runtii doonayo inaan buuxsado oo uu taageero Ruuxa Ilaah, markaa waa inaan furo dareenkeyga oo aan diyaar u ahaadaa inaan aqoonsado oo aan u aqoonsado Ilaah dhammaan qaababkiisa muujinta. Waa inaan dhahaa "haa" isaga qalbigayga oo dhan, iyadoo aan la xakameynaynin.
Goor dhaw ayaad joogi doontaa Advent iyo waqtiga kirismaska. Waxay xasuustaan ​​in Ciise, Wiilka Ilaah, uu bini-aadam noqday. Waxaan ka mid noqonay isaga. Maxaa markaa kici, xasilloonida gudaha iyo deggenaanshaha nolosha, aniga ama qof kale ma abuuri karno. Kaliya waa mucjisada weyn iyo hadiyadda Eebbe maxaa yeelay kulligeen waxaan nahay kuwo qiimo badan.